အသင်းခေါင်းဆောင်ဂိုမက်ဇ် မရှိလေ အတ္တလန္တာအတွက် ပိုကောင်းလေလား? – Play Maker Sports Journal
အသင်းခေါင်းဆောင်ဂိုမက်ဇ် မရှိလေ အတ္တလန္တာအတွက် ပိုကောင်းလေလား?
အတ္တလန္တာအတွက်အသင်းခေါင်းဆောင်ပါပူးဂိုမက်ဇ်ကလွမ်းစရာတိုက်စစ်သမားတစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့ပုံ မရှိပါဘူး။ အတ္တလန္တာအသင်းဟာဂိုမက်ဇ်မပါဝင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရလဒ်ပိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်လာနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အတ္တလန္တာဟာဂိုမက်ဇ်မပါဝင်ချိန်မှာဂိုးသွင်းအားပါမြင့်မားလာပါတယ်။ဂိုမက်ဇ်ပါဝင်တုန်းကတစ်ပွဲပျမ်းမျှ ၁.၉ဂိုးဘဲရှိခဲ့ရာမှာတစ်ပွဲပျမ်းမျှ၂.၈ဂိုးအထိမြင့်မားလာပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာပေးဂိုးကလည်းနည်းလာပါတယ်။ ဂိုမက်ဇ်ပါဝင်ချိန်မှာတစ်ပွဲပျမ်းမျှပေးဂိုး၁.၇ဂိုးရှိရာမှမပါဝင်ချိန်မှာပျမ်းမျှ၀.၇ဂိုးအထိလျှော့သွားခဲ့ပါတယ်။
အသင္းေခါင္းေဆာင္ဂိုမက္ဇ္ မရွိေလ အတၱလႏၲာအတြက္ ပိုေကာင္းေလလား?
အတၱလႏၲာအတြက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ပါပူးဂိုမက္ဇ္ကလြမ္းစရာတိုက္စစ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေနတဲ့ပုံ မရွိပါဘူး။ အတၱလႏၲာအသင္းဟာဂိုမက္ဇ္မပါဝင္တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာရလဒ္ပိုင္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္အတၱလႏၲာဟာဂိုမက္ဇ္မပါဝင္ခ်ိန္မွာဂိုးသြင္းအားပါျမင့္မားလာပါတယ္။ဂိုမက္ဇ္ပါဝင္တုန္းကတစ္ပြဲပ်မ္းမွ် ၁.၉ဂိုးဘဲရွိခဲ့ရာမွာတစ္ပြဲပ်မ္းမွ်၂.၈ဂိုးအထိျမင့္မားလာပါတယ္။အျခားတစ္ဖက္မွာေပးဂိုးကလည္းနည္းလာပါတယ္။ ဂိုမက္ဇ္ပါဝင္ခ်ိန္မွာတစ္ပြဲပ်မ္းမွ်ေပးဂိုး၁.၇ဂိုးရွိရာမွမပါဝင္ခ်ိန္မွာပ်မ္းမွ်၀.၇ဂိုးအထိေလွ်ာ့သြားခဲ့ပါတယ္။
ရွန်းနီရဲ့လက်စွဲတော် အသက် ၁၆နှစ်ရှိပါရမီရှင်တောင်ပံကစားသမားကို ခေါ်ယူနိုင်တော့မယ့် လီဗာပူး
ခြောက်ပွဲဆက်ရှုံးနိမ့်ထားသော်လည်း နည်းပြဒီဖရန်ဆစ္စကိုအား စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ ကက်ဂလီယာရီ